PSGkwụ PSG - PSG: Sarri karịa Allegri iji dochie Tuchel na Paris? - FOOT 01 - G XNUMXNELRAY .BỌCH.
N’ime ihe omume chụpụrụ Thomas Tuchel na njedebe nke oge, ọtụtụ ndị nkuzi ga-enwe mmasị na bench nke Paris Saint-Germain. Mgbe Massimiliano Allegri gasịrị, ekwuru aha onye nchịkwa Italiantali ọzọ.
Ọ bụghị ihe nzuzo na Thomas Tuchel na-egwuri egwu karịa naanị ịkụ ọkpọ nke Champions League. Ka ọgbasasị ahụ megide Manchester United na oge gara aga, ikekwe Paris Saint-Germain agaghị agbaghara ya ọdịda ọzọ na ebumnuche ya. Kwesịrị ikwu na ikpochapụ ọzọ na ọkwa a nke asọmpi ahụ ga-egbu ya na njedebe nke oge, n'agbanyeghị ndọtị ya ruo 2021 n'oge ọkọchị. Nke a bụ ya mere mmeri ahụ e meriri na Dortmund (2-1) na ụkwụ mbụ weghachitere asịrị ahụ. Enwere otutu okwu banyere Massimiliano Allegri, onye na - akwụghị ụgwọ n'ahịa ịnye ọzụzụ, onye profaịlụ ya na-amasị onye nduzi egwuregwu dị ka Leonardo.
Mana dị ka onye nchịkwa mbụ nke Juventus Turin si kwuo, ọ nweghị mkparịta ụka malitere. " Enweghị m mmekọrịta ọ bụla na Leonardo ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, gbaara Allegri to Figaro. Aka m ji nwayọ na-anụ ụtọ ịhe m nwere. M na-egbu egbu. Ma eleghị anya, n'ọnwa June ihe ga-eme na echeghị m. Yabụ na m masịrị m ịghara iche maka ya! Enweghị iku ume maka Tuchel. N'ihi na dị ka onye odeakụkọ nke La Gazzetta dello Sport si kwuo Nicolo Schira, Maurizio Sarri nwekwara ike ịghọ ụzọ egwu PSG ma ọ bụrụ na ọ ga-ahapụ Old Lady n'oge okpomọkụ a. Asịrị nke gosipụtara mmasị Leonardo maka profaịlụ Italiantali.
Kwe ka gọọmentị maliteghachi ikike ya n’ihe niile na ebe niile